Raysal wasaare H/mariam: Itoobiya waxay xoojinaysaa xidhiidhka wadanka Ruushka. - Cakaara News
Raysal wasaare H/mariam: Itoobiya waxay xoojinaysaa xidhiidhka wadanka Ruushka.
Addis Ababa(CN) Sabti.Jan.31.2015, Raysal wasaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn ayaa sheegay in Itoobiya ay kashaqaynayso xoojinta xidhiidhka labada dal ee Itoobiya iyo dalkaasi Ruushka. Wuxuuna sheegay raysal wasaaruhu in lasii xoojinayo sectorada shaqooyinka macdanta, dalxiiska, iyo qaybaha ubaxa.
Raysal wasaare H/mariam ayaa wasiiru dawlaha arrimaha dibada ee wadankaasi Ruushka ku qaabilay madasha shirarka ee midowga Afrika halkaas oo uu raysal wasaaruhu sheegay in loo bogay shaqooyinka macdanta ee u dhaxeeya labada dal taasoo Itoobiya ay ku taageerayso dhaq-dhaqaaqa hawlaha macdanta islamaraana u horseedi doona cutub cusub oo kafiican kii hore labada dal.
Wuxuuna raysal wasaaruhu carabka ku dhuftay in Itoobiya ay ubaxa suuq fiican kuleedahay wadankaasi Ruushaka, waxaan la isla fahmay in labilaabo duulimaad toos ah oo diyaaradaha ah taasoo kaduulaysa Addis ilaa Moscow-da Ruushka. Sidoo kale waxay tani kaalin hore ka qaadanaysaa xoojinta xidhiidhka dadwaynaha Itoobiya iyo Ruushka.
Dhinaca kale wasiiru dawlaha arimaha dibada ee wadanka Ruusha Mr. Michael ayaa sheegay in ay maal qabeenada wadankiisu ay rabitaan badan u qabaan shaqooyinka dhinacyada macdanta iyo dalxiiska. Waxayna tani kor u qaadi doontaa ayuu yidhi dhaqaalaha labada dal.